» कोच मिलन नेवारको टिमबाट को पुग्ला उत्कृष्ट १६ मा ?
कोच मिलन नेवारको टिमबाट को पुग्ला उत्कृष्ट १६ मा ?
११ पुष २०७८, आईतवार ११:३४
चन्द्र घलान, मकवानपुर, ११ पुस । द भोइस किड्स नेपालको लाईभ राउण्डमा कोच मिलन नेवारका ६ जना प्रतियोगीहरिु निक्कै दमदार रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरुको प्रस्तुतिले कोच मिलनको टिम पनि निक्कै बलियो भएको सावित गरिदिएको छ । कोच मिलनको टिमबाट लाईभमा भिडेका ६ जना प्रतियोगीहरुमध्ये आउँदो हप्ता ४ जना प्रतियोगीहरु उत्कृष्ट १६ मा प्रवेश गर्नेछन् भने बाँकी २ जना प्रतियोगीहरु शोबाट बाहिरिनेछन् । तपाईको विचारमा कोच मिलनको टिमबाट कुन कुन प्रतियोगीहरु उत्कृष्ट १६ मा पुग्लान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
कोच मिलनको टिमबाट लाईभ भिडेका क्षितिज पौडेल स्टिलबाट मिलनको टिममा आएका हुन् । उनले लाईभ शोमा निक्कै दमदार प्रस्तुति दिएका छन् । उनी लाईभ शोमा पफोमर अफ द डे समेत भएका थिए । १० वर्षीय क्षितिज रामेछाप निवासी हुन् । हाल उनी कलंकी बस्छन् । कक्षा ४ मा अध्ययनरत क्षितिज गायक बन्ने लक्ष्य राख्छन् । त्यस्तै टिम मिलनकै टेरेसा कुमारी विश्वकर्मा अर्का त्यस्ता प्रतियोगी हुन् जो उत्कृष्ट १६ मा पुग्ने सम्भावना निक्कै बलियो छ । ८ वर्षीया टेरेशा दैलेखको चामुण्डा निवासी हुन् ।
कोच मिलनकै टिमबाट तहल्का मच्चाईरहेका संयोग घिमिरे उत्कृष्ट १६ मा पुग्नसक्ने अर्का बलियो दाबेदार हुन् । लाईभ शोमा पनि तहल्का मच्चाएका संयोग ईटहरी ५ सुनसरी निवासी हुन् । १२ वर्षीय संयोग टिम मिलनबाट फाईनल दाबेदारहरु मध्येका एक हुन् । त्यस्तै कोच मिलनको टिममा स्टिल भएर आएका हितेश राउतलाई कतिपय दर्शकहरुले कोच मिलनको टिमबाट फाईनलमा पुग्ने दाबेदारका रुपमा हेर्दै आएका छन् । कोच मिलनको टिममा उनी चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल एकमात्र प्रतियोगी हुन् । १४ वर्षीय हितेश ईटहरी ९ सुनसरी निवासी हुन् ।
कोच मिलनको टिममा रहेका अर्का दुई हिराहरु हुन् नुमा राई र मिन्छामा राई । नुमा र मिन्छामालाई कोच मिलनको बलियो खम्बाहरुमध्ये मानिन्छ । उनीहरु पनि उत्कृष्ट १६ मा पुग्नसक्ने दाबेदारहरु हुन् । १४ वर्षीया नुमा राई ईलाम निवासी हुन् । हाल उनी झापामा बस्छिन् । त्यस्तै ११ वर्षीया मिन्छामा राई दार्जिलिङ मिरिक निवासी हुन् । साकेलाबाट गायन सुरु गरेकी मिन्छामाले पनि लाईभ शोमा तहल्का मच्चाएकी छिन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–